Sida loo sii qulquli Video ka PC in Roku
1 Qaabka il kasta oo Roku
2 Stream Video ka PC in Roku
3 YouTube on Roku
4 Roku Talooyin iyo tabaha
5 Roku Dhibaatooyinka
A yar oo Roku set-top fudud koriyo wax kasta oo aad suurto gal doonayaan in RV ah: Amazon, Netflix, Hulu, HBO iyo Pandora.
Oh, iyo sidoo kale, okay, ma arrin kasta, ma sii qulquli karaan maktabadda shakhsi ah videos aan software kale ee cid saddexaad. Laakiin ha ka welwelin! Halkan waxaan ku tusi doonaa laba siyaabood oo shaqo lagu sameeyey hesho. Mid ka mid ah waa in ay isticmaalaan Video Converter Wondershare taas oo fudud u fududahay in ay Mudanayaasha; kale waa in la isticmaalo Plex caanka ah kuwaas oo si fiican u caawisaa abaabulo warbaahinta oo ku qulquli in aad shaashadda weyn. Si aad u hesho xal ka badan, ka hubi noo dhamaystiran hage ku saabsan sida loo sii qulquli warbaahinta in TV .
Habka 1: Isticmaal Wondershare Video Converter
Habka 2: Isticmaal Plex
Wondershare Video Converter ma aha oo kaliya Converter awood leh, laakiin sidoo kale editor video ah, downloader iyo DVD gubi. Version ugu danbeeyay xitaa ka mid plugin awood loo yaqaan Media Server, kaas oo awood kuu inay sii qulquli aad files warbaahinta maxaliga ah ka PC in Roku ilaa iyo inta labada iyaga ka mid ah waxay ku yaalaan shabakad isku mid ah. Hadda Raac tallaabooyinka hoose si aad u aragto sida ay u shaqayso:
Talaabada 1: Daahfurka Server Media
Ka dib markii ay ku rakibidda Wondershare Video Converter, astaanta toobiye ee Server Media la muuqan doontaa desktop-ka. Marka waxa la bilaabay, Server Media si toos ah lagu ogaan doonaa qalabka hoorto heli karaa shabakad isku mid ah. Xaaladdan oo kale, dooran Roku ka hoose ee suuqa kala hoose.
Tallaabo 2: Ku dar files deegaanka, waxa uu
Dooro category ka dhankiisa midig ee xagga Media Server, ka dibna ku dhuftay "scan Disk" in lagu daro saxaafadda oo dhan in cajalladaha iyo fayl si aad u faylasha saxaarad. Waxa kale oo aad dooran kartaa in aad guji "Import" in aad ku darto files gaar ah. Si toos ah u heshaan faylasha aad, falgali kaliya xulashada Computer ah.
Tallaabo 3: Ku bilow hoorto
Ka dul clip ah iyo "Play On TV" icon muuqan doonaa. Riix uu saaran yahay suuqa kala hoorto arbushin ilaa doona. Marka file waxaa si guul leh ku raran yihiin, oo aad si degdeg ah u raaxaysan kartaa shaashadda weyn. Waxa kale oo aad xakamayn kartid loo maqli karo ee ay la qabsado mugga ama la beddelo is waydaarsaday.
Xal kale oo fiidiyoow laga PC in roku waa in la isticmaalo Plex. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu noqon karaa xeelad badan si ay u samaystaan. Halkan aan aragno sida loo bilaabo:
Talaabada 1: samaysay ee Server Plex Media
Marka hore waa in aad kala soo bixi iyo rakibi Media Plex Server in aad PC. Markaas double guji Plex Media icon Server ee System saxankaaga.
Dhowr ilbiriqsi ka dib, tab cusub oo loo siiyaa biraawsarkaaga arbushin doonaa. Halkan guji "+" iyo aad arki doonaa shan doorasho ee ku daray warbaahinta in aad maktabadda. Dooro nooc ka mid ah oo guji "Next".
Markaasuu ku dhacay "Add Folder" oo uu dedeg gal ay ku jiraan warbaahinta aad rabto in aad ku darto. Guji "Add Folder" mar haddii aad rabto in aad ka mid ah fayl oo dheeraad ah.
Marka aad dhamayso samaynta doorashooyin aad, guji "Add Library". Waxay qaadan kartaa Daqiiqad ama laba warbaahinta si aad u muuqan in tab browser.
Tallaabo 2: Ku dar Plex channel
Ka dibna ku dar channel Plex si aad Roku iyo dooran channel this shaashadda TV aad. Waa in aad ka files warbaahinta la doortay, kuwaas oo aad hadda isticmaali kartaa iyo aragtida sida aad jeceshahay.
10 Talooyin iyo tabaha ka faaidaysiga ee Roku
Sida loo il kasta Video iyo Qaabka Audio in Roku
Sida loo Daawo YouTube on Roku
Top 7 daalacashada ugu wanaagsan ee Windows Phone
Xadaysan No Haddaba Dhegayso Spotify Music via Spotify on Windows Phone
Sida loo soo celiyo nidaamka Windows la Drive Recovery USB ah
Sida loo Gadzhiyev Windows Hard Drive in kale
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray ama la tirtiro Faylal ay ka Windows 8
Sida loo dayactir Windows 7 kala sooc lahayn loo fariisiyo
> Resource > Windows > Sida loo sii qulquli Video ka PC in Roku